जहाँ मारिँदैनन् पशु-पन्छी, खाइँदैन मदिरा र सुर्ती
सुजीतकुमार झा जनकपुर, १ चैत
पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट झन्डै ७ किलोमिटर दक्षिणतर्फको नहर छिचोलेपछि सफा र हराभरा रौतहटको नजरपुर गाउँ पुगिन्छ । चन्द्रपुर नगरपालिका– ९ मा रहे पनि यो गाउँ ग्रामीण क्षेत्र नै रहेको छ ।
यहाँका करिब ४ सय घरमध्ये कुनैमा पनि कुखुरा, हाँसलगायत पन्छी तथा खसी, बोका पालिएको छैन ।
एउटा व्यक्ति शाकाहारी हुन सक्छ, एउटा परिवार शाकाहारी पनि छ तर सिंगो गाउँ नै शाकाहारी भनेको सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । विविधताले भरिएको हाम्रो देशमा यस्तो पनि छ । नजरपुर पूरै ‘शाकाहारी वस्ती’ हो ।
चन्द्रपुर नगरपालिका– ९ स्थित सिंगो गाउँका बासिन्दा शाकाहारी छन् । वर्षौंदेखि गाउँलेले काटमार, मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन र जुवातास निषेध नै गरेका छन् । प्रदेशकै नमुना धार्मिक गाउँ नजरपुर अहिले निजानन्दधामका नामले प्रसिद्ध छ ।
रौतहटमा नजरपुर ‘नमुना’ वस्तीका रूपमा चिनिन्छ । मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरी आउने पाहुनालाई यहाँका स्थानीयले वाससमेत नदिने नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका सचिव गौतम श्रेष्ठले बताए । झैझगडासमेत नहुने हुँदा यो गाउँबाट अहिलेसम्म अदालतमा एउटा पनि मुद्दा परेको छैन ।
३ वर्षअघि धार्मिक उत्सवका क्रममा यहाँ आएका पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नजरपुरलाई ‘स्वर्गको एउटा गाउँ’ भनेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो देशमा यस्तो पनि गाउँ रहेछ । स्वर्गझैँ लाग्ने नजरपुर वस्ती रहेछ ।’
‘शाकाहारी नमुना गाउँ’का नामले समेत परिचित नजरपुर प्रदेश २ को धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यमा समेत सूचीकृत रहेको प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री डा. डिम्पल झाले बताइन् ।
२०२० सालदेखि वस्ती बस्न थालेको यस गाउँका घरघरमा भगवान् श्रीकृष्णको पूजा गरिन्छ । गाउँका सबैले कृष्ण प्रणामी धर्म मान्दै आएका छन् । गाउँलेकै सक्रियतामा नजरपुरलाई २० वर्षअघि पूर्ण साक्षर बनाइएको शिक्षक उद्ववप्रसाद पौडेलले बताए ।
सो गाउँका करिब ४ सय घरधुरीका सबै मानिस कृष्ण प्रणामी धर्म मान्नेहरू छन् । गाउँको मध्यभागमा निर्माण गरिएको कलात्मक कृष्ण प्रणामी मन्दिरले पर्यटक तथा धेरैको ध्यान खिच्ने गरेको छ । मन्दिर परिसरमा रमणीय सुन्दर बगैँचा छन् ।
मन्दिरमा विद्यालय, पाकशाला, वृद्धाश्रम, धर्मशाला सञ्चालन हुँदै आएको मन्दिर समितिका अध्यक्ष दाताराम दाहालले बताए । मन्दिरको पूर्वाधार निर्माण गर्नकै लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
२०२२ सालदेखि निरामिष भोजन प्रयोग गर्ने शुद्ध शाकाहारी श्री कृष्ण प्रणामी भक्तजनहरूको बसोवास रहेको इतिहास छ । उक्त क्षेत्रमा धार्मिक, पर्यटकीय एवम् सामाजिक सेवाको प्रेरक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यअनुरूप नै कार्य भइरहेको छ ।
अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यस क्षेत्रलाई हिंसारहित धार्मिक, सामाजिक, पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्दै अध्यात्मिक मार्गबाट सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटन विकासमा मद्दत पु¥याउन महोत्सवले ठूलो सहयोग गरेको छ ।’
गाउँमा ६ वटा किराना पसल सञ्चालनमा रहेको दाहालले बताए । ती पसलमा सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री हुँदैन ।
लामो समयदेखि किराना पसल गर्दै आएका स्थानीय डिल्लीप्रसाद देवकोटाले पान पराग, खैनी, बिँडी, चुरोट र मदिरा केही पनि बिक्रीका लागि नराखेको सुनाए । स्थानीयलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा अध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ राख्ने अभियान यहाँ चलाइएको छ ।
नजरपुरका अधिकांशको मुख्य पेसा कृषि हो । गहुँ, धान, दूध र मकैको बिउ उत्पादनका लागि गाउँ प्रख्यात छ । दुग्ध सहकारी र केही कृषि सहकारीसँगै बिउ उत्पादन कम्पनीसमेत गाउँमा छन ।
नमुना महिला कृषक सहकारी संस्थाले प्रदेशकै नमुना बिउबीजन उत्पादन गरी देशैभर बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । पूर्ण रूपले जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक विभेदमुक्त गाउँका सबै घरमा व्यवस्थित शौचालय छ ।
४ दशकयता गाउँका कसैको पनि अदालतमा मुद्दा नपरेकामा आश्चर्य लाग्ने गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव राजिव झाले बताए । आफूले गाउँको महत्ता बुझेपछि केही दिनअघि त्यहाँ घुम्न गएको थिए उनले बताए । झैझगडा तथा अपराधका घटना नभएपछि अदालत धाउनु नपरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
नमुना गाउँका रूपमा विकसित नजरपुरको आधुनिकीकरणका लागि ढल, सडक तथा कृषि प्रविधिका लागि बजेट आवश्यक रहेको चन्द्रपुरका मेयर रामचन्द्र चौधरीले बताए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १, २०७६, ०७:१३:००
दाउराले गल्फ खेल्थिन् फोर्ब्सकी प्रभावशाली महिला
रामनवमीमा पनि शान्त जनकपुर (फोटो फिचर)
बिहे गर्न लागेकाे जाेडीलाई नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखियाे
दिल्लीको धार्मिक सभामा सहभागी नभेटिएपछि चिन्तामा प्रदेश सरकार
कोरोना नियन्त्रणका लागि नीति निर्माणको जिम्मा विज्ञलाई
जनकपुरमा पनि कोरोना परिक्षण मेसिन जडान
‘प्रदेश–२ मा भाषणबाजी बाहेक केही भइरहेको छैन्’
कोरोनाविरुद्ध लड्न विश्वभरका सरकारलाई १९३ देशका राजनीतिक दलको अपिल
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई बिगमार्टमा खाद्यसामग्री खरिद गर्दा १० प्रतिशतसम्म छुट
मेगा बैंकको ५/५ लाख रुपैयाँ सहयोग गण्डकी र सुदूरपश्चिमलाई
कोरोना भाइरस रोकथाम कोषमा नेपाल लाइफको १ कराेड रूपैयाँ सहयोग
प्रदेश १ मा एनआईसी एशियाको ५ लाख रुपैयाँबराबरको खाद्यसामग्री सहयोग
राष्ट्रपतिको सम्बोधन: आकाश निर्मल र नीलो देखिएको छ (पूर्ण पाठसहित)
कोरोना नियन्त्रणमा रोटरी क्लब अफ तिनाउँकाे सहयाेग
कपिलवस्तु आगलागी : समयमै दमकल नपुग्दा सिंगो टोल नै सखाप
नेपालमा आउने र नेपालमा हुने विदेशी पर्यटकको भिसा थप गरिने